Izinto ezibalulekileyo Ukuzi malunga neCCPP yokuBambisana neZatifikethi - ITS
CCNP Ukubambisana neZatifikethi
Umsebenzi wokungabikho komsebenzi kwi-IT
I-CCNP yokuBambisana neMigaqo-nkqubo yokuHlola
Ukuqinisekiswa kwakhona kwe-CCNP ilungelelaniso
CCNP Uqhagamshelwano lweZatifikethi:Iimfuno eziphakanyisiweyo zeengcali kunye nokuphindaphinda kweengcali ezilwa neentlobo ezifanayo ezifana neziza zenze izitshixo zokulinganisela ezintsha kunye nezikhombisi. Oku kuyisisiseko kwi-IT kumashishini apho imeko ibuhlungu khona, ngenxa yokuqhubela phambili ngokuqhubekayo kweshishini kuyo yonke into. Omnye kufuneka, ngokufanelekileyo, abe nomgwebo ngelixa ekhetha ukuphakamisa amandla abo nokuzimisela kwezatifikethi kunye nezifundo kufuneka zisekelwe kuyo njengoko kunjalo.
Izatifikethi ezigqwesileyo kwi-IT yoshishino Iziqinisekiso zeCisco kwaye banesakhiwo esibonakalisiweyo sokuqinisekisa umntu. Iipiramidi ezithatha emva kokuba zinamanqanaba kwinqanaba lebhayibhile kwisiseko, elandelwa lizinga leNxulumano, kuloo nqanaba Inqanaba lezakhono, elilandelayo lizinga leNzululwazi ngokugqithiseleyo phezulu kwinqanaba le-Architect. Ngaphandle kwinqanaba lecandelo ngalinye kunamaphepha afanelekileyo kunye neendlela ezifunekayo kufuneka zifunde kwaye zicacise ngalinye iqanaba. Iziqinisekiso ekulandelelaneni kwazo zihamba-
Ukuhamba kunye nokutshintsha
Icandelo ngalinye lepiramidi linendima yalo yokudlala kwaye ibandakanya enye into entsha ukuze iyanelise imfuneko yeefayili zengqesho ezahlukeneyo. Ukuphakama kwakho ukuya kumanqanaba akho okuphakamisa ukuphucula kunye nezifundo ezixhasayo ziye zenze i-Skills Networking Skills. 'INqanaba loPhulo' lilandela iziqinisekiso -
I-CCNP Ukuhamba kunye noTshintsho
Umboneleli weNkonzo kaCCNP
Ukusebenzisana kweCCNP - Izinga eliphezulu
Ukusebenzisana kweCCNP Inkqubo yokuqeqeshwa komsebenzi kunye nokuqeqeshwa kwenziwa, ukhumbule, ukuphucula ukuqonda kwakho kunye nokukwazi ukuhambisa 'iindleko zezoshishino'. Kuyo nayiphi na intsebenzo ye-IT yentsebenziswano yoshishino kunye nophuhliso luyimfuneko enkulu kwaye Ukusebenzisana kweCCNP ukuyixhaphaza ngelo mandla ukwakha ukusebenza komsebenzi wakho ohlangeneyo.
Unokwenza oku kuqinisekiswa emva kokugqitywa kwe-CCNA yokubambisana kunye nesiphi na isatifikethi seCCIE. Ukuhamba kunye nolu qeqesho olufunekayo olufunekayo
Ukusebenzisa i-Cisco IP Telephony kunye neVidiyo, Icandelo 1
Ukusebenzisa i-Cisco IP Telephony kunye neVidiyo, Icandelo 2
Ukuphanda i-Cisco IP Telephony neVidiyo
Ukusebenza kwezicelo zeCisco Collaboration
Ezi zihamba kunye neemviwo kufuneka uzicace-
Oku kulandelayo ngamanqaku anomdla weemviwo:
Uviwo - Ixesha elide - Inani lemibuzo
300-070 CIPTV1 - imizuzu ye-75 - 55-65
300-075 CIPTV2 - imizuzu ye-75 - 50-60
300-080 CTCOLLAB - imizuzu ye-75-55-65
I-300-085 CAPPS - imizuzu ye-75-55-65
Umntu oneminyaka eyi-18 okanye ngaphezulu angakwazi ukulungiselela uviwo.
Ukujoliswa kovavanyo kuqinisekisa ukugcinwa kweengxelo ngeefayili yekhompyutha kunye nophawu oluphambili, ngokufanayo, i-ID yesibini ephakanyiswe nguRhulumente. (Ngaphandle kwamanani amaninzi angadlulanga).
Abantu abahlala kwiintlanga ezifana neCuba, i-Iran, iSiriya, iNorth Korea ne-Sudan banqandekile kulo mviwo.
Izikolo zibhaliwe kwiwebhu kwaye zibalwa ngokuhlawula ubuncinane ukugqithisa okanye ukudlula.
Iimfuno ezixhasayo zokuhlala zizinzile iintsuku ezi-5 zeeshedyuli zokufumana uvavanyo.
Emva kokugqiba ngokugqibeleleyo uviwo loxwebhu oluxutywe ngomfanekiso wekhompyutha lukhutshwa.
Ungakwazi ukulandelelana kwangaphambili, isimo kunye namanqaku anomdla wesiqinisekiso kunye ne-Cisco Certification Tracking System.
Isatifikethi sivumelekile ixesha elide kwaye sinokuphinda siqinisekiswe ngokudlula nayiphi na imilandela phambi komhla wokuphela koviwo:
I-642-XXX / 300-XXX yovavanyo lwezinga lobugcisa,
I-CCIE yangoku iVavanyo,
I-CCDE yangoku idibene / iphantsi komhlaba ukuHlola,
Okubaluleke kakhulu kukho konke ukufuna isatifikethi kunye noqeqesho oluvela kwiCisco Learning Partner efana ne-- "IYO” who offer the most recent, refreshed and superlative Cisco courses for networking professionals.
Bona kwakho : CCNA Certification - Isikhokelo esigqibeleleyo
CCNA Iingcali eziQinisekisiweyo - Imibuzo yoVavanyo kunye nezimpendulo